Syria: Wafuuda Dowlada & Mucaaridka oo gaaray Geneva iyo dood weli taagan! - Wargane News
Home Somali News Syria: Wafuuda Dowlada & Mucaaridka oo gaaray Geneva iyo dood weli taagan!
Syria: Wafuuda Dowlada & Mucaaridka oo gaaray Geneva iyo dood weli taagan!
Waxaa maanta oo Sabti ah magaalada Geneva ee dalka Switzerland gaaray wafdi kasocda Isbaheysiga Kooxaha Mucaaridka Siiriya, walow furitaankii shirka uu Jimcihii shalay dib u dhacay.
Shalay ayey magaalada Geneva gaareen dhamaan wafdigii ka socday dhinaca Dowlada Bashaar Al Assad oo uu hogaaminayo Safiirka Siiriya u fadhiya Qaramada Midoobay Bashar Jaafari oo shalay kulan gaar ah la yeeshay Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Siiriya Staffan de Mistura.
Ambassador Staffan de Mistura ayaa sheegay inuu marka ay yimaadaan wafuuda mucaaridka ay rajeenayaan in wadahadalka ugu horeeya la furo maalinimada Axada beri ah.
Balse Kooxaha Mucaaridka ayaa sheegay in ay doonayaan intaan wadahadalka la furin marka hore ay dowlada Siiriya iyo Beesha Caalamka kasoo baxaan shuruudo la xariira in wax laga qabto xaalada bini’aadamnimo ee deegaanada go’adoonka ku jira ee wadanka Siiriya.
Waxaa sidoo kale shirka ka maqan kooxaha Kurdida ah ee gacanta ku haya qeybo kamid ah waqooyiga Siiriya iyo waliba kooxaha Islaamiga ah oo ay ku jirto Daacish oo dhul baaxadleh oo kamid ah Siiriya weli ka talisa.
dawladda mucaarid ka ah geneva
Wargane Tv: Xildhibaan Indho indho oo bulshada reer Ceerigaabo kula dardaarmay KULMIYE
Somaliland: Jamaal Cali Xuseen Oo Hanjabad U Diray Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo Iyo Xisbiga Kulmiye
Somaliland: Madaxweynaha Somaliland oo Xalay Masaafo Dheer Socod ku Maray Shaaricyada London